BASAASAA BIRHAANUU CIMDEESSAA JEDHAMU BEEKTUU? -Caalaa Bultumee, akka Odeeffannoo haqaa argatetti – Beekan Guluma Erena
BASAASAA BIRHAANUU CIMDEESSAA JEDHAMU BEEKTUU? -Caalaa Bultumee, akka Odeeffannoo haqaa argatetti	Beekan Erena
Politics Category June 22, 2016OROMO
BASAASAA KANA BEEKTUU? Basaasan wayyaanee Biraanuu Cimdeessaa jedhamu kun kan dhalatee guddate lixa Shagar Aanaa Amboo Waddeessa Ganda Harbuu Xirroo jedhamutti dhatee guddate . Gantuu fii basaastun kun biyyaa Dhiiraa Ambotti haadhalatu malee. Biyyu dhaltee guddate keessatti diina wajjin ta’uun ilmaan oroomoo hiisisuu fii ajeesisuu kan jalqabe achumatti. Hojii farrumaa isaa kan jalqabe 1992 ALH. Amboti kan jalqabe yoo ta’u, jalqaba 1994 hojii basaasummaa fii Baandii Hora Amboo keessatti shubbisaa ta’uun wayyaanee fii OPDO tajaajilaa ture.
Dhumaatii fii hidhamuu ilamaan Amboo keessaa ga’ee olaanaa kan qabu yoo ta’u,hanga1998 Jaagamaa Badhaanee ajeefamutti basaasummaan itti fufee , sana booda wayyaanen hojii isaa kanatti gammaduun gara finfinneetti dabarsitee barnoota Basaasummaa edda kenniteefii booda mindaa guddaan ramadamee osoo kanaan jiruu 2003 namicha Tigree Afawarq jedhamu waliin gara Ambootti deebifamee otoo hojii isaa farrummaa kana hojjataa jiruu, Afawarq wajjin Aangoo irratti waldhabdee gara Wallagaa Horroo gudurutti darbuun 2005 ti hojii farrummaa isaa kana ilmaan oromoo irratti raawachaa ture. Achii kaasanii Gara GUJII tii jijjiiranii itti gaagatamaa Tikaa godina Gujii gochuun muudanii ilmaan oromoo hiisisaa biyyaa hariisisaa turee Fincila yeeroo darbee irratti Sabboonaa Ilma oromoo Dargaggoo Badhaadha Galchuu Fiigaa Gujii ganda Magaadoo keessati pestol(shugixiin) rukutee ajeese. Samaan duras achuma gujii keessatti Badhaanee Tisoo fii Isiraa’el Xisoo dabalatee namootayeeroof maqaa hinbeekne 4 poolisoota fideraalaa tin guyyaa tokko nama 6 ajeesise. Namni harka dhiigaa kun ilmaan oromoo dhiifnaan Haadhaa fii Abbaa isaati illee nama kabajaa hin qabnee fii hawaasa Amboo keessatti jibbamaa fi Abaaramaa akka ta’e uummanni Amboo fi Gujii ragaa ba’u. Namni kun maqaa jijjiirratee waan socho’uuf, gujiirraa kasanii gara hinbeekkamnetti jijjiiramee jira. Warri nama kana argitan akka walbeeksifnu isin gaafana. Namoonni odeessa fii seenaa namakanaa Ambo irraa nuuf ergitan galanni keessan bilisummaa haata’u! namooni suraa isaa argachuu dandeessan nuuf erguun bineessa kana irraa akka of eegan ykn akka ajeessan gochuun dirqama lammummaa haa baanu. Share gochuu hin dahayinaa.
Namoonni maqaan isaanii asii olitti dhahaman kunneen yeroo jahaa ol Yunivarsiitii Amboo keessaa gadi nabaasanii naqaorataniiru. Halkan qixxees manaa akkan ba’uuf naaf bilbilamee dideera. Namni seenaa kana qindeessite galata guddaa qabda. Seenaa kana itti fufnee barreessina…
← NYAATARRAA SI UUMEE?, HINMAKATIIN! FI BAKKAAFI AKKA MALEE-Biiftuu Urjii Nagoo’tiin
EKERAAKEE-Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)’tiin →